Indlela ikuvumela ukuba ujonge imifanekiso kunye nevidiyo ezithunyelwe yiMessage | IPhone iindaba
UPablo Aparicio | | Ukhuseleko lwePhone
Phakathi kwengxabano yezomthetho apho i-FBI icela iApple ukuba inciphise amandla okubethela i-iOS, iqela labaphandi abavela kwiYunivesithi yaseJohn Hopkins eMelika lifumene indlela ebavumelayo. Cacisa imifanekiso kunye nevidiyo ezithunyelwe ngeMessage kwiinguqulelo ezindala ze-iOS. Iqela sele lazisile iApple ngale ngxaki kwaye inkampani eqhuba uTim Cook iya kukhupha uhlaziyo emva kwexesha kwanamhlanje oluya kulungisa ingxaki.
UMatthew Green, okhokela iqela elibandakanya yena noChristina Garman, uGabriel Kaptchuk, uMichael Rushanan kunye no-Ian Miers, utsho bug ichaphazela kuphela iinguqulelo ezindala ze-iOS Kwaye ikwi-encryption algorithm eyenziwa yinkampani yaseCupertino ukukhusela umxholo othunyelwe ngeMessage.
1 Uguqulelo oluntsonkothileyo lwemessage alukhuselekanga nge-100%
2 Ingxaki yalungiswa ngokuyinxenye kwi-iOS 9
Uguqulelo oluntsonkothileyo lwemessage alukhuselekanga nge-100%
Emva kokufunda inkcazo yenkqubo yokubethela kwisikhokelo senkampani ye-apile, uGreen ukrokrela ukuba into inokuthi ingasebenzi kwi-encryption ka-Apple. Umphandi uyakuqinisekisa oko Wazise uApple yobukho bengxaki, kodwa yamothusa into yokuba ingalungiswanga kunye neepatches kamva. Emva kwexesha, wadibana neqela labafundi kwaye wenza i ukuxhaphaza ethi, ithiyori, ixhaphaze ukusilela.
Iqela labaphandi licacisa ukuba isiphoso sikhona Imessage igcina njani imifanekiso kunye neevidiyo kwi-iCloud kwabelwane kwincoko, ukubakhusela ngamaqhosha angama-64. Abaphandi babenakho ukubuza eli qhosha kwiseva ye-iCloud, umlinganiswa omnye ngexesha, bade bakwazi ukuhlengahlengisa ngokupheleleyo isitshixo, babavumela ukuba bafumane umxholo wokuqala. U-Ian Miers uthe zikhona ezinye izicelo ezikwanayo le mpazamo, kodwa wala ukutsho ukuba ziyintoni na, ke oko akwaziwa ukuba zisuka kwi-iOS kuphela okanye zikwelinye iqonga.
Ingxaki yalungiswa ngokuyinxenye kwi-iOS 9
NgokukaGreen, iApple lungisa le bug ngokukhutshwa kwe-iOS 9, Kodwa ithi uhlaselo lusenokusebenza kuhlobo lwamva nje lwe-iOS kunye notshintsho oluthile. Iinguqulelo ezisemngciphekweni kuhlaselo lwayo njengoko luphuhliswa ngoku zii-iOS 8.x kunye neenguqulelo ezindala. Ukuba akukho zimanga, i-iOS 9.3 iya kukhutshwa namhlanje, enokubandakanya olunye uphuculo olunokuyilungisa ngokupheleleyo le bug. Iqela labaphandi lithi iApple izakukhupha ingxelo entsha ye-iOS namhlanje eya kuthi ilungise ingxaki, ke iinguqulelo ezintsha ze-iOS 8.x kunye ne-iOS 7.x zinokwenzeka.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iPhone » Ukhuseleko lwePhone » Bafumanisa indlela evumela ukubethela imifanekiso kunye nevidiyo zeMessage
Ayikuthetheleli ukuhlaziywa kwi-iPhone 4s akukho nto inomdla kule nguqulo. Kuhle le ndiyibonayo kodwa ukuba umntu undixelele ukuba bandinika izizathu ezifanelekileyo zokwenza oko
Lungisa izixhobo zakho, kunokwenzeka ukuba i-iOS 9.3 ikhutshwe namhlanje